Ampitomboy ny fivarotana sy ny famokarana ataon'ireto Hacks 6 ireto | Martech Zone
Ampitomboy ny fivarotana sy ny famokarana ataon'ireto Hacks 6 ireto
Alatsinainy, May 25, 2020 Alatsinainy, May 25, 2020 Adam Hempenstall
Isan'andro dia toa tsy dia manam-potoana firy hikarakarana ny asanay izahay. Mifanohitra amin'izany satria maro ny fampiharana, hacks ary fitaovana manampy antsika hamonjy fotoana ankehitriny. Toa ny toro-hevitra sy ny tetika izay tokony hamonjy fotoana fotsiny dia tena mitondra vokany lehibe amin'ny famokarantsika.
Mpankafy be aho amin'ny fampiasana faran'izay betsaka amin'ny fotoanako isan'andro ary ezahiko atao ny hahatonga ny mpiasako rehetra hamokatra araka izay tratra - indrindra ny ekipan'ny varotra, izay sampana tena ilaina indrindra amin'ny orinasa SaaS rehetra.
Ireto ny sasany amin'ireo fomba sy fitaovana ampiasaiko hiarovana ny tenako sy ireo ekipako mivarotra fotoana bebe kokoa ary hanatsarana ny famokarana ankapobeny.
Hack 1: Araho ara-pivavahana ny fotoanao
Izaho dia niasa teny lavitra tany nandritra ny 10 taona mahery izao ary halako tanteraka ny hevitra hanarahana ny fotoanao rehefa miasa ianao. Tsy mbola nampiasa izany aho hanamarinana ny mpiasako, saingy hitako izany mety hahasoa tokoa ho an'ny rindranasa sasany.
Nandritra ny iray volana teo ho eo, dia nanara-maso ny fotoanako tamin'ny asa rehetra nataoko aho. Ho an'ny asa sarotra toa ny fiasana amin'ny drafitry ny varotra ataontsika amin'ny zavatra tsotra toy ny fanoratana mailaka. Namporisihiko ny mpiasako mba hanao toy izany mandritra ny iray volana, ho an'ny rakitsoratra manokana. Nanokatra maso ny valiny.
Hitanay fa lany andro amin'ny asa tsy misy ilana azy tokoa ny ankamaroan'ny fotoanay. Amin'ny ankapobeny dia nandany ny ankamaroan'ny androm-piainantsika izahay nanoratra mailaka sy tany am-pivoriana, tsy dia nanao asa tena izy. Raha vantany vao nanomboka nanara-maso ny fotoanay izahay dia afaka nahatsapa fa ny ankamaroan'ny fotoanay no very fotsiny. Tsapanay fa nandany fotoana be loatra tamin'ny fampidirana data ao amin'ny CRM anay ny ekipanay fa tsy hiresaka amin'ny vina sy hivarotra ny anay rindrambaiko fanolorana soso-kevitra. Niafara tamin'ny fanamboarana tanteraka ny fizotry ny varotra sy ny fikorianay momba ny fitantanana ny tetikasa izahay mba hahomby kokoa amin'ny fotoana.
Ny Proposaly tsara kokoa dia ahafahanao mamorona tolo-kevitra tsara sy maoderina ao anatin'ny minitra vitsy. Ireo tolo-kevitra namboarina tamin'ity fitaovana ity dia miorina amin'ny tranokala, azo zahana ary mampiova fo be. Ny fahalalana ny fisokafan'ny tolo-kevitra dia manampy anao hanaraka amin'ny fotoana mety, ary hahazo fampandrenesana ihany koa ianao rehefa alaina, sonia na aloa amin'ny Internet ny volavola. Ataovy mandeha ho azy ny varotrao, ataovy manaitra ny mpanjifanao ary mandrasà orinasa bebe kokoa.
Midira maimaim-poana amin'ny Proposal
Hack 2: Mihinàna sahona mivantana?
Voalohany, tsy manoro hevitra ny hihinana sahona mivantana aho. Misy teny malaza nataon'i Mark Twain izay nilaza fa tokony hanao izany ianao mihinana sahona velona ny zavatra voalohany maraina. Tamin'izany no nanaovanao ny zavatra ratsy indrindra mety hitranga ao anatin'ny iray andro ary ny zavatra hafa rehetra mety hihatsara kokoa.
Ny sahona mivantana anao no asa ratsy indrindra mipetraka eo an-tampon'ny lisitry ny zavatra tokony hataonao. Ho ahy dia mitantana tapakila fanampiana ny mpanjifa izy ity. Isaky ny maraina rehefa mamono ny solosainako aho dia manokana adiny iray na roa amin'ny famakiana sy ny famaliana ny mailaky ny mpanjifa. Toy ny tsio-drivotra ny andro sisa. Ho an'ny ekipako mivarotra dia manoro hevitra anao hanao zavatra mitovy amin'izany aho. Samy hafa ny hevitry ny olona momba ny azy sahona velona dia, noho izany dia tsy manome soso-kevitra ny tena hetsika aho, fa kosa mamporisika anao hanao asa faran'izay ratsy indrindra amin'ny maraina.
Hack 3: tombony ara-tsosialy ho an'ny tranonkalanao
Ny fahazoana varotra bebe kokoa amin'ny alàlan'ny marketing dia mitaky fotoana sy vola. Ambonin'izany, ny fananganana fomba vaovao hahazoana mpanjifa dia mitaky fikarohana sy asa mafy. Saingy misy fomba iray hahazoana varotra bebe kokoa nefa tsy mandany vola fanampiny - mampiasa porofo ara-tsosialy.
Ity tetika ara-barotra ity dia voadinika tsara ary voaporofo fa miasa amina indostria maro isan-karazany. Raha tsorina, dia tokony hampiasa ny traikefan'ny mpanjifa efa misy miaraka amin'ny marika ianao handresen-dahatra ny mpanjifa bebe kokoa handany vola miaraka aminao.
Ny karazana porofo ara-tsosialy malaza dia misy ny famerenana, fanekena, fijoroana vavolombelona, ​​fampandrenesana fiovam-po ary maro hafa. Misy ihany koa fomba ankehitriny kokoa toy ny fampandrenesana fanovana.
Raha efa manana mpanjifa afa-po ianao, ny fampiasana ny zavatra niainany amin'ny toerana mety amin'ny tranokalanao dia mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny taham-pivadihana sy ny isan'ny varotrao. Na izany aza, tsy misy vahaolana tokana-refy ary mila fanandramana kely vao hahazoana ny raofim-porofo ara-tsosialy mety. Ny vaovao tsara dia, mandeha izy ary tena mandaitra.
Hack 4: Raiso ny fivarotana an-tserasera
Ekipa mpivarotra maro no mbola mampiasa fomba fanao nentin-drazana izay tian'izy ireo hihaona amin'ilay prospect manokana hanakatonana ny fifanarahana. Na dia misy tombony maro aza io dia misy lafiny ratsy ihany koa. Isaky ny mandeha mivory ianao dia very fotoana sy vola be dia be, nefa tsy fantatrao raha mivadika fivarotana ilay fivoriana.
Betsaka ny fitaovana amin'izao fotoana izao izay manamora ny fanidiana ny fivarotana lavitra. Fampandrenesana fihaonambe toy ny Zoom avelao ianao hanao antso an-tsary alohan'ny handaminana fivoriana manokana. Amin'izany fomba izany, na dia tsy mahazo ny varotra aza ianao dia ho very 15 minitra amin'ny fotoanao fotsiny fa tsy andro iray manontolo hitsidihana ilay vinavina.
Hack 5: ampifanaraho amin'ny ekipa ny varotra sy ny varotra
Amin'ny ankamaroan'ny orinasa niasako, nikatso ny fizotry ny varotra noho ny antony tsotra iray. Ny sampana varotra dia tsy nahalala izay nataon'ny departemanta marketing tamin'ny atiny sy ny fitaovam-barotra ary miaraka amin'izay koa, ny departemanta marketing dia tsy manana an-tsaina ny zava-mitranga amin'ny varotra isan'andro. Vokatr'izany, maro ny fampahalalana very ary samy tsy mandaitra ny sampan-draharaha roa.
Mba hitazomana ny ekipa roa tonta amin'ny pejy iray ihany, zava-dehibe ny fananana fivoriana tsy tapaka izay tarihan'ny ekipa mpivarotra sy marketing ary ny mpikambana dia afaka miara-mipetraka sy mifanakalo hevitra momba ny zava-mitranga isaky ny departemanta. Ny marketing dia mila mahafantatra momba ny fifandraisan'ny mpivarotra amin'ny mpanjifa. Mandritra izany fotoana izany, ny varotra dia mila mahafantatra ny atiny farany atrehan'ny mpanjifa mba hahafahan'izy ireo mampifanaraka ny fomba fiasan'izy ireo rehefa mifandray amin'ny vina vaovao. Ny hany ilaina dia 15 minitra isan-kerinandro ary samy ianao serasera ekipa ary hihatsara ny famokarana.
Hack 6: Ho hentitra kokoa amin'ny fivorian'ny fivarotana
Raha misy olona avy amin'ny ekipa mpivarotra manana fihaonambe amin'ireo mety ho mpanjifa dia manana ny fotoana rehetra manerantany izy ireo. Na izany aza, ho an'ny fivoriana anatiny dia tena voafetra ny fotoanantsika. Tadidinao ny fanarahana fotoana nataontsika? Fantatray fa nandany adiny 4 isan-kerinandro izahay tamin'ny fivoriana izay tsy nanao na inona na inona mihitsy tamin'ny tanjon'ny varotra.
Amin'izao fotoana izao, dia feranay hatramin'ny 15 minitra farafahakeliny ny fivorianay rehetra. Izay rehetra mihoatra an'izany dia mila mailaka ary famantarana fa tsy napetraka tsara ny fandaharam-potoanan'ny fivoriana. Our fankasitrahana ny mpiasa namaky ny tampon-trano ary mitahiry fotoana be dia be isika ankehitriny - noho ity hack tsotra ity.
Ny ekipa mpivarotra lehibe dia tsy maintsy ilaina amin'ny orinasa te-hampitombo ny vola miditra sy ny mety hitombo. Ireto misy sasany amin'ireo teknika lehibe ampiasainay hiantohana ny vokatra azo avy amin'ny ekipanay, ary antenaiko fa mahasoa azy ireo izany. Angamba ny fakana zava-dehibe indrindra eto dia ny tsy ny fanapahana rehetra momba ny famokarana rehetra ary ny teknolojia avo lenta - afaka mahavita zavatra mahatalanjona ianao amin'ny fanovana ny sasany amin'ireo fanaonao sy fahazarana.
Tags: fampandrenesana fiovam-poendorsementsfampifanarahana amin'ny varotra sy ny varotrafihaonambe an-tseraserafampisehoana an-tseraseravarotra an-tseraseratolo-kevitrarindrambaiko fanolorana soso-kevitrahevitravarotra sy varotra marketingfivarotana fivarotanafamokarana varotratolo-barotraTolo-kevitra momba ny varotrafanarahana ny varotraporofo ara-tsosialyfijoroana vavolombelona
Adam Hempenstall no CEO sy mpanorina ny Better Proposals, rindrambaiko tolo-kevitra tsotra hamoronana tolo-kevitra tsara sy misy vokany be ao anatin'ny minitra vitsy. Nanampy ny mpanjifany tao amin'ny Better Proposals hahazo $ 120,000,000 + tao anatin'ny herintaona fotsiny, nandefa ny Oniversite Proposal Writing voalohany izy izay nizarany fomba fanao tsara indrindra momba ny tolo-kevitr'asa.
Ny 3 tatitra isaky ny B2B CMO dia mila velona ary mivoatra amin'ny 2020